Fanafihana mitam-piadiana: voaroba ny vola mitentina 10 tapitrisa Ar | NewsMada
Fanafihana mitam-piadiana: voaroba ny vola mitentina 10 tapitrisa Ar
Ankatoky ny fetim-pirenena isika izao, mandravarava ihany koa ny asan-jiolahy. Toeram-pivarotana iray ao amin’ny fokontany Tanakompania, an-tampon-tanànan’i Betroka, lasibatry ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Vokany, voaroba ny vola tao an-tsena mitentina 10 tapitrisa Ar. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola nisy voasambotra ireo nahavanon-doza, tsy mbola misy ihany koa ny olona ahina ho nahavita ny asa ratsy, saingy mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha.
Tonga am-pilaminana nandondona tao amin’ireo tompon-tsena ny jiolahy dimy lahy tsy nisaron-tava. Nanontany azy ireo ireo mpivarotra ary namaly ireo jiolahy fa i Patrick, mpivarotra kiraro, ihany ity. Anarana nentin’ireo olon-dratsy namitahana ireo tompon-tsena. Voaambana basy sy famaky efatra avy hatrany anefa ireo tompon-tsena raha vantany vao nisokatra ny varavarana. Nandrahona sy nitaky vola ireo jiolahy ka tsy nahatohitra intsony ireo tompon-tsena. Vokany, nanaiky ny fangatahana ireo niharam-boina, saingy tsy afapo ireo mpanafika. Mbola nitaky vola hafa izy ireo na niezaka nanafina sy tsy hanome izany ireo tompon-tsena. Vokany, voatery nanaiky tsy fidiny izy ireo. Taorian’izay, nitsoaka nandositra ireo jiolahy. Fotoana fohy taorian’io, tonga teny an-toerana ny polisy, saingy tsy nahatratra intsony ireo olon-dratsy.
Manoloana ny tranga, nivory haingana iroe mpikambana eo anivon’ny OMC, ny lehiben’ny distrika ao an-toerana, nandinika ny paik’ady rehtra ho fampanjakana ny fandriampahalemana ao amin’ny distrikan’i Betroka, indrindra mialoha sy mandritra ary aorian’ny fetim-pirenena.